Adora & etc.: October 2012
Posted by Adora etc. at 05:26 No comments:
ပြီးခဲ့တဲ့ လပြည့်တညက အိမ်နားတဝိုက်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းနဲ့တွေးမိ၊ မြင်မိတာတွေကို ချရေးထားတာပါ။ လကသာသာနဲ့ မြင်သမျှ ကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းလို့ စာတပုဒ်ထွက်လာသလား မသိ။ ကဲ ကျွန်မနဲ့တူတူ လမ်းလျှောက်လိုက်ခဲ့ကြပါအုံး။
(အဲဒီနေ့ညက ကင်မရာ မပါသွားတာ တော်တော်နောင်တရနေပါတယ်။ နောက်ဆိုဘယ်သွားသွား ကင်မရာယူမှဖြစ်တော့မယ်။ :D အောက်ကပုံကို Google ကယူပါတယ် )
ဖယောင်းတိုင် အတိုအစတွေနဲ့ မုန့်အချို့
ဟော ဟိုညာဘက်မှာ မီးရောင်တချို့
ငါတို့ အမောပြေ ကော်ဖီဆိုင်
ဝိုင်နီဆိုင် တဆိုင် ဖြစ်ပါစေ။
အများသုံး တီဗီ ရှေ့မှာ
မျက်လုံးတွေကတော့ တီဗီ ပေါ်မှာမရှိဘူး
အင်း.. သူတို့လိုချင်တာ တီဗီ မဟုတ်ဘူး...အဖော်။
ဟိုး ရှေ့ရှေ့က မီးတွေက ထူးထူးခြားခြား
အရွယ်လတ် အမျိုးသမီး တစု
စုပေါင်းပြီး "က" ရတဲ့ အကတမျိုး ကျင့်နေကြတာပါ
တချို့က စည်းချက်ကြကြ လှလှပပ
တချို့က မညီမညာ ယောင်ရောင်မှားမှား
ဘေးမှာ ဆရာလုပ်တဲ့သူက ပီတိတွေစားလို့။
ဘေးကို မော့ကြည့်တော့ သူကပြုံးပြတယ်
Posted by Adora etc. at 07:21 No comments:
တလောကရုံးမှာ Team Building အနေနဲ့ တနေရာကို Company က စပွန်ဆာပေးပြီးသွားကြဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ရုံးခွဲတွေရှိပေမဲ့ ကျွန်မတို့ရုံးမှာပဲ စီစဉ်တာပါ။ ဒါနဲ့ပဲ တခြားရုံးခွဲမှာ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူငယ်ချင်းကို လှမ်းစလိုက်ပါတယ်။
"ငါတို့တော့ ဘယ်နေ့ကြရင် အလုပ် လုပ်စရာ မလိုဘူး"
"နင် တို့ရုံးမှာတော့ မလုပ်ဘူး ဟုတ်?"
သူက ဒီနိုင်ငံက စ လူမျိုး ယောက်ကျားလေး သူငယ်ချင်းပါ။ ရှားရှားပါးပါး စ လူမျိုးထဲမှာ အရမ်းကူညီတတ်.. အရမ်းသဘောကောင်းပြီး မတွက်ကတ်တာမို့ ငယ်သူငယ်ချင်းမဟုတ်ပေမဲ့ တော်တော်ခင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ စကားပြောဖြစ်ရင်း သူကလဲ မရောက်ဖူးတဲ့နေရာမို့ စိတ်ဝင်စားပုံ ရပါတယ်။
"ဘယ်သူတွေရော ပါမလဲ" နဲ့ မေးနေတာမို့ ကျွန်မကလဲ လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ပြဿနာက သူက Company တူပေမဲ့ တခြားရုံးခွဲကမို့ လိုက်မယ်ဆိုရင် ခွင့်ယူရပါမယ်။ Company က သူ့အတွက် စပွန်ဆာလဲပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လဲ ကျွန်မတို့သွားမဲ့ နေရာက
အားလုံးပေါင်းမှ ဒေါ်လာ၂၀ လောက်ကြမှာပါ။ သူက "သွားဖြစ်ရင် ပြန်ပြောအုံး" ဆိုပြီး အစည်းအဝေး ရှိလို့ စကားပြတ်သွားပါတယ်။
နေ့လည်ထမင်းစားတော့ တခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တယောက်နဲ့ အဲဒီအကြောင်းပြန်ပြောမိရော။ သူငယ်ချင်းကောင်လေးကို ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့လေ။
အဲဒီမှာသူက ချက်ခြင်းပဲ ( မြန်မာလို ပြန်ရရင်)
"ဟယ် နင်ကသူ့ရည်းစား မှို့လို့ သူက ခွင့်ယူ၊ သူ့စရိတ်သူခံပြီး လိုက်ရမှာလား?"
ရုတ်တရက် တော်တော်အံ့ဩသွားသလို "ငါ သဘောကောင်းတဲ့ သူကို အခွင့်အရေးယူပြီး အဖော်ရရုံ ခေါ်မိသလား" ဆိုပြီး စိတ်ထဲ တမျိုးတောင်ဖြစ်သွာပါတယ်။
တကယ်က သူလဲခွင့်ရက်တွေ ရှိ.. ( သူက ခရီးထွက်တာဝါသနာမပါ.. ဘယ်မှလျှောက်မသွား... အလွန်အလုပ်ကြိုးစားပြီး တော်ရုံ ခွင့်မယူလို့ နှစ်ကုန်ရင် ၃ပတ်လောက် အိမ်မှာနားပြီး ခွင့်ရှင်းရတဲ့ သူမျိုးပါ။) စိတ်ဝင်စားပုံလဲရ တာမို့လို့ ပျော်ပျော်ပါးပါးသွားဖို့ ခေါ်လိုက်တာပါ။
ဒါကို တခြားသူတွေ အမြင်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ တွေးရင်း ဒီနေ့တော်တော် စိတ်ရှုတ်နေပါတယ်။
Posted by Adora etc. at 06:40 No comments: